Markab "shidaal u geeyay" Kuuriyada Waqooyi oo "la qabtay" - BBC News Somali
Markab "shidaal u geeyay" Kuuriyada Waqooyi oo "la qabtay"
29 Disembar 2017
Image caption Markabka Lighthouse Winmore waxaa la sheegay in uu shidaalka u sido Taiwan, balse dhankaas muusan aadin
Kuuriyada Koonfureed ayaa shaacisay in bishii la soo dhaafay ay qabatay marka ka diiwaan gashan Hong Kong, kaas oo looga shakiyay in uu shidaal u geeyay Kuuriyada Waqooyi oo cunna qabateyn ay saaran tahay.
Saraakiisha waxay sheegayaan in markabka loo yaqaano Lighthouse Winmore uu si qarsoodi ah ugu wareejiyay 600 oo tan oo shidaal ah, markab kale oo ay leedahay Kuuriyada Waqooyi.
Qaraarka Qaramada Midoobey wuxuu mamnuucayaa in maraakiib ay isku wareejiyaan alaab u socota maamulka Pyongyang.
Fashilkan ayaa imaanayo iyadoo Shiinaha uu beeniyay eedaha kaga imaanaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Beijing ay ogolaatay in shidaal loo geeyo Kuuriyada Waqooyi.
Sidee shidaalka loogu geeyay Pyongyang?
Markabka Shiinaha ayaa galay dekadda Yeosu ee Kuuriyada Koonfureed, 11-kii Oktobar, wuxuuna ka qaaday Shidaal cayriin ah, afar maalmood ka dib wuxuuna u dhaqaaqay dhanka Taiwan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Yonhap.
Laakiin, markabka ayaa 19-kii Oktobar, shidaalka ku wareejiyay markab ay leedahay Kuuriyada Waqooyi iyo doomo yaryar oo ku sugnaa biyaha caalamiga ah, sida ay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Koonfureed.
Trump: "Waan burburin doonaa Kuuriyada Waqooyi"
Kuuriyada Waqooyi: Trump "eey ciyay kama duwana"
Donald Trump oo u hanjabay Kuuriyada Waqooyi
Wargeyska New York Times ayaa qoray in kala wareejinta lagu ogaaday sawirro uu qaaday dayax-gacmeed Mareykanka uu leeyahay. Waxaa sawirradaasi baahiyay wasaaradda maaliyadda Mareykanka, bishii Nofembar, inkastoo aan la magacaabin markabka xamuulka qaado ee Lighthouse Winmore.
Waxaa markabka la qabtay markii uu ku noqday Yeosu, bishii Nofembar, wuxuuna weli ku sugan yahay Kuuriyada Waqooyi, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen.
Shiinaha maku lug leeyahay?
Lama cadeyn karo, laakiin Markabka wuxuu ka diiwaan gashan yahay Hong Kong, wuxuuna u shaqeeyaa shirkad Taiwan laga leeyahay.
Image caption Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kin Jong-un wuxuu diiday in uu madaxa u raariciyo cadaadiska caalamiga ah
Dowladda Shiinaha waxay sheegtay in eedeynta ka dhanka ah "aysan xaqiiqada ku saleysnayn".
"Shiinaha marna uma ogolaanayo in ganacsigiisa guud iyo midka shaqsiyadeed ay ku xadgudbaan cunna qabateynta uu Golaha Amniga ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi," ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hua Chunying.
Shiinaha wuxuu maamulaa qiyaastii boqolkiiba 90 ganacsiga caalamiga ah ee Kuuriyada Waqooyi.
Muxuu Trump ka xanaaqay?
Waxaa jiro shaki sii kordhaya oo Washington ay ka qabto maraakiibta Shiinaha in si sir ah ay shidaal ugu wareejinayaan doomaha Kuuriyada Waqooyi.
Farriinta Twitter-ka ee Donald Trump waxay daba socotay warbixin arrinta ku saabsan oo lagu qoray wargeys Kuuriyada Koonfureed laga leeyahay oo lagu magacaabo Chosun Ilbo.
Isagoo soo xiganayay saraakiisha Kuuriyada Koonfureed, waxaa lagu qoray in alaab ay sida sharci daro ah ay maraakiib isugu wareejiyaaan lagu sawiray dayax-gacmeedyada Mareykanka in kabadan 30 goor, tan iyo bishii Oktobar.
Khamiistii, Madaxweyne Trump wuxuu Twitter-ka ku qoray "in uu aad uga niyad jabay" Shiinaha oo uu sheegay "in lagu qabtay khaladka".
Wuxuu wargeyska New York Times u sheegay in "uu isu jilciyay" Shiinaha marka ay timaado dhanka ganacsiga, sababtoo ah "waxaan doonayay in ay naga caawiso arrinta Kuuriyada Waqooyi".
Trump ayaa hadda ku cagajugleynaya in uu soo afjari doono xiriirkaasi.
Wuxuu yiri: "Shidaal ayaa ku socdo Kuuriyada Waqooyi. Sidaas ma ahayn heshiiska. Haddii aysan naga caawin Kuuriyada Waqooyi, marka waxaan sameynnayaa wixii aan sheegayay markasta in aan sameyn doono."
Kuuriyada Waqooyi oo "xadday qorshaha duullaanka" Mareykanka
10 Oktoobar 2017
Japan "oo ka hortageysa madaafiicda" Kuuriyada Waqooyi
6 Nofembar 2017
Kuuriyada waqooyi oo Australia uga digtay siyaasadaha Trump
20 Oktoobar 2017
Trump oo Kuuriyada Waqooyi ugu baaqay "wada hadal"
7 Nofembar 2017
Askari kale oo Kuuriyada Waqooyi ka goostay
21 Disembar 2017